उत्तम नि: शुल्क छवि बैंकहरू पत्ता लगाउनुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
उत्तम नि: शुल्क छवि बैंकहरू पत्ता लगाउनुहोस्
छविहरू जुन हामीले हाम्रो प्रोजेक्टहरूको लागि प्रयोग गर्छौं हुनुपर्दछ उत्तम सम्भावित गुण, र हाम्रो आवश्यकतामा समायोजित। यदि तपाईंसँग आफ्नै स्रोतहरू छैन भने, चिन्ता नलिनुहोस्, किनकि हामी तपाईंलाई केही निःशुल्क छवि बैंकहरू देखाउँदछौं ताकि तपाइँ सब भन्दा राम्रो दृश्य परिणाम प्राप्त
यो स्पष्ट छ सशुल्क छवि बैंकहरूले अधिक धेरै प्रस्ताव राख्छन् स्रोतहरूको, तर कहिलेकाँही लगानी गर्न बजेट हामी सम्म पुग्दैन, वा प्रतिलिपि अधिकार विना विकल्पहरू राखेर यसको मूल्य हुँदैन। थप रूपमा, यदि सामग्री काम वा व्यक्तिगत ब्लगको लागि हो भने, संसाधनहरू जुन हामीले तपाईंलाई तल देखाउँदछौं यस प्रकारको प्रोजेक्टको लागि पर्याप्त हुनेछ र हाम्रो आवश्यकतालाई बढाउँदछ।
1 रचनात्मक कमन्स CC0 लाइसेन्स
6 खानेकुरा खाने
रचनात्मक कमन्स CC0 लाइसेन्स
El Creative Commons यो एक हो गैर नाफामुखी संगठन। यो क्यालिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्थित छ। तिनीहरू विभिन्न टुक्राहरूको लेखकहरूको ग्यारेन्टी गर्न समर्पित छन् तिनीहरूको कामको शोषण सीमा वा सिर्जना मा इन्टरनेट। अर्कोतर्फ, यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कानुनी रूपमा परियोजनाहरू वा अन्यको कार्यहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, जबसम्म लाइसेन्सको सम्मान गरिन्छ।
त्यहाँ छन् विभिन्न प्रकारका इजाजतपत्रहरू रचनात्मक कमन्स। बिभिन्न दृश्य प्रतीकहरू प्रत्येक इजाजतपत्रको साथ सम्बन्धित छ र, त्यसकारण, ती फरक अनुमतिहरू जुन तिनीहरू प्रत्येकले अनुमति दिन्छ।
वेबसाइटहरू जुन हामी तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछौं, अधिकमालाइसेन्स छोरा CC0। यो इजाजतपत्रको बारेमा हो रचनात्मक कमन्स शून्य। यस अवस्थामा, ती सबै अंशहरू कुनै आरक्षित अधिकार बिना नै हुन्। यसको मतलब तिनीहरू हुन् सार्वजनिक डोमेन र तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पनि सर्त बिना लगभग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो दिमागमा लिनुपर्दछ कि तिनीहरूको केहि सीमितता छ, जे भए पनि यो कम हो। उदाहरण को लागी, कुनै हिंसात्मक वा वयस्क साइट मा यसको उपयोग निषेधित छ।
यो छवि बैंक उत्कृष्ट छ, र एक तरिकामा हामीलाई धेरै प्रस्ताव प्रदान गर्दछ free। एक छ फोटोग्राफरहरूको विस्तृत दायरा जुन यस साइटलाई उच्च गुणस्तरको सामग्री राख्न अनुमति दिन्छ। हामीले तपाईंलाई पहिले नै भनिसक्यौं, तपाईंको छविहरूको इजाजतपत्र छ रचनात्मक साझा शून्य (CC0)
Pexels यो एक उत्कृष्ट प्रस्ताव छ किनकि यो पोर्टल हो जुन समर्पित छ उहि वेबसाइटमा अन्य नि: शुल्क छवि बैंकहरूबाट छविहरू स collect्कलन गर्नुहोस्.
हामी त्यो पुष्टि गर्न सक्छौं Unsplash आज एक इन्टरनेट मा सबै भन्दा राम्रो CC0 इजाजतपत्र छवि बैंक हो। तपाईको उच्च गुणवत्ता छविहरू कुनै शुल्क बिना। थप रूपमा, र धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा, तीसँग निरन्तर बृद्धि हुन्छ जसले हामीलाई नयाँ सामग्री लिन र लगातार रिसायकल गर्न अनुमति दिन्छ।
यस पोर्टलको अर्को विशेषता भनेको लेखकमा क्लिक गर्न र तत्काल उनीहरूको सबै कार्यहरू देख्न सक्षम हुनुको तथ्य हो। यसले हामीलाई फाइदा पुग्न सक्दछ जब हामी खोज गर्दछौं कि सबै रचनात्मक उहि दृश्य रेखा पछ्याउनुहोस्।
यो छवि बैंकको एक छ उच्च-गुणवत्ता सामग्रीको विस्तृत श्रृंखला। उहाँ वास्तवमै व्यावसायिक हुनुहुन्छ र आफ्ना छविहरू, ल्यान्डस्केप र प्रकृति प्रबलता बीचमा। हामीले पाएको एकमात्र नकारात्मक पक्ष त्यो हो सबै स्रोतहरू जुन तिनीहरूले हामीलाई देखाउँछन् CC0 अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त गर्दैनन्.
हामी तपाइँको खोजमा, त्यसलाई जोड दिन चाहन्छौं विभिन्न प्यारामिटरहरूद्वारा फिल्टरि allows अनुमति दिन्छ जस्तै:
जब उनीहरू आफैं परिभाषित गर्छन्, फ्रीपिक पोर्टल हो "सबैका लागि ग्राफिक स्रोतहरू "। जब हामी भन्छौं "सबैका लागि" एक धेरै साधारण कारणका लागि हो, छविहरू बाहेक उनीहरूसँग अन्य धेरै उपयोगी संसाधनहरू छन्। उसको प्रस्ताव यो निम्नानुसार छ:
थप रूपमा तपाईको खोज इञ्जिनमा हामी सिधा बीच छनौट गर्न सक्दछौं नि: शुल्क वा प्रीमियम सामग्री। यससँग सम्भावनाहरूको विस्तृत श्रृंखला छ जुन हामी एकल सर्तका साथ प्रयोग गर्न सक्दछौं, लेखकलाई उचित रूपमा उल्लेख गर्न। अर्कोतर्फ, भुक्तानी विकल्प, प्रीमियम कल समान रूपमै कम लागतमा छ। भुक्तानी गर्दै प्रत्येक महिना करीवeयूरोको रकम तपाईसँग धेरै थप स्रोतहरूमा पहुँच छ र लेखकलाई उद्धृत नगरीकन.
También existen छवि क्षेत्रहरू एक क्षेत्र मा विशेष, यस अवस्थामा यो एक हो संसाधन केन्द्रित प्लेटफर्म जहाँ खाना देखा पर्छ। प्रस्ताव धेरै ठूलो नहुन सक्छ, तर यो ध्यान दिनुपर्दछ कि छविहरू जुन तिनीहरूको छविहरूको गुणवत्ता र व्यावसायिकता उत्कृष्ट छ। यदि हामीलाई थाहा छ कि कसरी स्रोतहरूको फाइदा लिन सकिन्छ र हामी सिपालु छौं भने हामी वास्तवमै उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्न सक्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » उत्तम नि: शुल्क छवि बैंकहरू पत्ता लगाउनुहोस्
मास्टरकार्ड र एक ब्रान्ड बनाउन यसको नवीनता: अडियो ब्रान्डि।
आधिकारिक क्रोम थिमहरू अब क्रोम वेब स्टोरबाट उपलब्ध छन्